ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကြီးဒေါ်စုသို့ ပေးစာ ...
ခင်ဗျားမြင်တဲ့အမြင်က ဈေးပေါလွန်းပါတယ်ဗျာ။ မမြင်မိလို့လား၊ မမြင်တတ်တာလား၊ ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုး ဝေဖန်လို့ နာမည်ကြီးချင်လို့လား ဆိုတာတော့ ကိုယ်ဖာသာကိုယ်ရွေးတော့ ကိုယ့်လူရေ။ တခုတော့ ပြောချင်တယ်။ ကိုယ့်ရပ်တည်ချက်အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုရင် ဒီထက်ပိုပြီး ရိုးသားပြီး လက်တွေ့ကျသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။
ေ-ာက်ဆင့်မရှိတဲ့စာတွေ ကို ဦးဒေါက်တာကြီးက ဘလော့မှာ တင်းပေးတယ်ဆိုတော့ .. ဦးဒေါက်တာကြီးလဲ ... အင်း ...
Mg Lu Aye said...
ဒေါ်စုဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ တိတိကျကျရှင်းပြပေးပါလား။ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ယခုအချိန်ထိလေးစားအားပေးလျှက်ပါ။(ဒါပေမဲ့)ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေး ရောတာတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကည် ဘောလုံးပွဲလေးတစ်ခါ သွာုးကည့်မိပါတယ်...လူရွှင်တော် " ငြိမ်းချမ်း " တို့ ပျက်သလိုပဲ- လင်ခိုးမိတဲ့ အတိုင်း ဆိုသလို ဖြစ်နေပါရော့လား... ခင်ဗျားတို့"ဒေါ်စုအနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး လုပ်ခဲ့တာ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘောလုံးအေုကာင်းသိဖို့ ပါပဲလား" ဆိုတဲ့အမြင်က "မင်းတို့ဗမာဘုရားကလည်း ဘ၀တွေဘယ်လောက် ဘာလုပ်ခဲ့တယ်- တန်ခိုးတွေ ဘယ်လိုရှိတယ်နဲ့နောက်ဆုံးသေတော့လည်း သူလိုကိုယ်လို ပါပဲလား" ဆိုတဲ့ ဘာသာုခားတယောက် ပြောတာထက် ဆိုးနေပါပကောလား.... ကဲဗျာ- အဲသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကည်က အသုံးမကျဖူးဆိုရင် ကိုဝတုတ်ရေ- ခင်ဗျားဦးဆောင်ဗျာ..နည်းဗျူဟာတွေ ဆွဲဗျာ...ုပည်သူကို ချပြဗျာ...ထိရောက်ရင် ကျုပ်တို့ တတွေ ခင်ဗျား ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာလုပ်၊ သူတပါးကို အပုပ်ချုပီး စည်းရုံးစရာမလိုပဲ ခင်ဗျားရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းတွေလုပ်မယ်..ကျုပ်တို့အပင်ပန်းဆင်းရဲခံပြီး ရှာဖွေထားတဲ့ ချွေးနှဲစာလေးတွေလည်း တော်လှန်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ထည့်မယ်ဗျာ...လောလောဆယ် ဒေါ်စုနေရာမှာ ခင်ဗျားသာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ တစ်ချက်လေးကိုပဲ အရင်ချုပပါဦး... အခုတော့ဗျာ- မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ.... အရေးဆိုမှ ဘယ်ချုံထဲက ဖုတ်ဖက်ခါထလာသလဲတော့ မသိဖူး- ရေးလိုက်တဲ့စာက အဆင့်မရှိလိုက်ပုံများ စစ်အစိုးရသတင်းစာ ဆောင်းပါးတွေထက်တောင်ဆိုးပါ့ဗျာ.. ဆရာလွဏ်းဆွေခင်ဗျာ- ဆင်ခြင်သုံ့ သပ်နိုင်အောင် တင်ပေးတယ်ဆိုလည်း နိုင်ငံရေးပါးဝ၊ အတွေးအခေါ်ပါတဲ့သူတွေရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတွေ တင်ပေးပါဗျာ...ဥပမာ- ဆောင်းပါးရှင် ဂါမဏိလိုပေါ့... အခု ဒီဆောင်းပါးရှင်ကတော့ စစ်အစိုးရလက်ထက်က အစိုးရအာဘော်ဆောင်းပါးတွေရေးတဲ့ မအူပင်ခြင်ကျား နဲ့နင်လားငါလားပဲ... ဆရာဝက်ဘ်ဆိုဒ် ပင်တိုင်ပရိသတ်အနေနဲ့ဒီလိုနိမ့်ကျတဲ့ အတွေးအခေါ်၊ အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ မတင်စေချင်ဖူးဆရာ... နာမည်ုကီးပြီးရော- လမ်းလေးခွမှာ မူးမူးနဲ့ဓါးသိုင်းကမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေပေါ့..
ပေးစာတွေ တဦးထဲသီး သန့်ရေးတော့ NLD နဲ့ လမ်းခွဲတော့မှာလားလို့ ထေ့ကြ ငေါ့ကြတယ်။ ဘာလုပ်လုပ် NLD ရပ်တည်ရေး အလေးထားပါတယ် ဆိုပြန်တော့ ပါတီမသေရေးအတွက် ဘာမဆိုလုပ်မယ် ဖြစ်ရကောင်းလား လုပ်လာကြပြန်ပြီ။ ဘာတွေလဲကွာ။ မင်းတို့ကြေနပ်အောင် ဘာလှိုင်း ညာလှိုင်း ဘာတိုက်ပွဲ ညာတိုက်ပွဲ တွေ စိတ်ရှိသလောက် စီးခွင့် တိုက်ခွင့်ပေးတော့မှ ဘဲ အကောင်းပြောကြမှာလား။ မင်းတို့ အဲသည်လို တိုက်ပွဲတွေ ရှေ့က တင်ထားချင်လို့ အစကထောက်ခံခဲ့တာဆိုရင်လဲ ဗြောင်ပြောဘို့ လိုပြီထင်တယ်။ ခုလိုမိန်းမလို မိန်းမရ လုပ်ရပ်တွေဟာ တော်လှန်ရေးသမားကောင်းတွေရဲ့ အလုပ်မဟုတ်တာသေချာတယ်။ စစ်အုပ်စုရဲ့ အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ စာတွေနဲ့ သိမ်ဖျင်းတာခြင်း အတူတူ ဖြစ်နေပါပေါ့လား။
လေတီ စု က ဒီမိုကရေစီနေ့ မှာ တာဝန်ကိုယ်စီ သိ မှ တဲ့ ။
ပြော လဲ ပြော ထွက် လေ ရဲ့
ပြော လဲ ပြောရက် ပေ ရဲ့
အမေ စု မေမေ စု လို့ ပြောပြော နေတဲ့ လေဒီ စု ။
တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ် မင်း လုပ်ဖို့ အခွင့်အာဏာ
တာဝန်သိစွာ ပေး ခဲ့ ကြတာ ပြည်သူတွေ ဟဲ့ ။
ဖင်ခေါင်း ကျယ်ကျယ် ၁၉၉၀ က
နင့် စကားတွေ အတွက်
ဘယ်သူတွေ တာဝန် သိဖို့ လိုလဲ
ဘယ်သွူ မှာ တာဝန်ရှိ လဲ ။
ပြည်သူပေး တဲ့ အခွင့်အာဏာ
ဘာ လုပ် လို့ ဘာ ကိုင် ရမယ် မသိ
အား အား ရှိ ပြည်သူ အချစ်တော်
ဖြစ်ချင် တဲ့ စိတ္တဇနာ
သက်သာ ဖို့ စည်းရုံးရေး နဲ့ အချိန်ကုန်
ပြည်သူတွေ မစည်းလုံး လို့
NLD ရှံးခဲ့ လို့ လား ။
၂ ၂ နှစ် အကြာမှာ ဘာမှ ဖြစ်မလာတာ
Sorry ပါ တဲ့ ။
လေဒီ စု သာ တာဝန် သိ မယ်ဆို
စတိုင် တင်းတင်း နဲ့ မျက်နှာဖုံးပုံ ရိုက်ပြီး
ပြန် ခဲ့တာချည်း မဟုတ်ပါ ဘူး နော်
အမေ စု မေမေ စု လို့ ပြောပြော နေ တဲ့ လေဒီ စု ။
မျိုးချစ်နန္ဒ ရေးတာကို သဘောတူပါတယ်။ အဆင့်မရှိတဲ့ နာမည်ရင်းတောင် မဖော်ပြရဲ့ တဲ့ ဝတုတ်ရေးတဲ့စာကို ကြည့်ရင် ခင်ဗျားရဲ့အောက်တန်းကျတဲ့မျိုးရိုးနဲ့အကျင့်စာရိတ္တ ကိုမှန်းလို့ ရတယ်။ ကိုလွမ်းဆွေ.. ခင်ဗျာရဲ့blog. မှာ ဒီလိုအဆင့်မရှိတာတွေ မတင်ပါနဲ့ ။
အကိုဝတုတ်ရေ...။ ခေတ်သစ်လူငယ်လေးတွေတောင် ဒီလောက်မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေသေးတာဗျာ... အကို့မှာဘာကြောင့်ဒီလိုအတွေးတွေ၊အမြင်တွေကျန်နေသေးတာလဲ။ အချိန်မှီတုန်းပြောင်းပစ်လိုက်စေချင်တယ်...။ အမေစုရဲ့၁၅.၀၉.၂၀၁၁ရက်နေကမိန့်ခွန်းချွေထားတာလေးကိုလဲနားရင်းအိပ်ပျော်သွားပုံရတယ်...။ ထပ်ပြီးရှင်းသွားအောင် နားထောင်လိုက်ပါအုံးလို့အကြံပြုပါရစေ အကိုရေ...။ ဒါဆိုရင်အကိုဝတုပ် ဒီမိုကရေစီရဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်...။
ကိုဝတုတ်ရေ... တလုံးမကျန် ထောက်ခံတယ်ဗျို့။ ကိုဝတုတ်ရေးထားတာနဲ့ ကျနော့်အမြင်နဲ့ တထပ်တည်းပဲ။
လေဒီဇတ်ကားရုပ်ရှင်ထွက်လာပြီးတဲ့ နောက် အန်တီစုကလည်း မီးရှယ်ယိုးထက် ပိုခေတ်မီအောင် လေဒီဂါဂါ စတိုင်များလုပ်နေသလားလို.တောင် ထင်မိပါတယ်၊ ခုတစ်လော ဒေါ်စုရဲ့ လှုပ်ရှားမူတွေကို ကြည့်ရတာ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်နဲ. မတူပဲ celebrity တစ်ယောက်နဲ. တူနေတာကို တွေ.နေရတော့ စိတ်မကောင်းမိပါဖူး၊ (ဒေါ်စုကို အရမ်းချစ်တဲ့သူများ ရင်ထဲနည်းနည်းအောင့် သွားခဲ့ရင် အေဘီစီကို ခွင့်လွှတ်ပါ)၊
ဒေါ်စုနဲ. NLD ကရွေးကောက်ပွဲမှာ မပါတဲ့အခါ ရွေးကောက်ပွဲကြီးက ဆားမပါတဲ့ ဟင်းလို ပေါ့ပျက်ပျက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်၊ NLD လို ပါတီကြီးမပါတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ ကလည်း သံသရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒေါ်စု ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ပါတယ်၊ တကယ်လို ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရင်လဲ မဲလိမ်၊ မဲခိုး၊ ဓါးမိုး၊ သေနတ်မိုးနဲ. ကြံဖွံ.ပါတီပဲ အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်၊ မကြာမှီသေးခင်ကပဲ အမေရိကန်ကလဲ ကြံဖွံ. အစိုးရကို sanction တစ်နှစ်တောင် ထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်၊ ကမ္ဘာနိုင်ငံများကလည်း သံသရာအပြည့်နဲ. စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အချိန်မှာ လက်ရှိမြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာထောက်ခံမူရအောင် ဒေါ်စုနဲ. လက်တွဲတယ်ဆိုတာကို ပြသနေတာပါ၊
အနှစ် ၂၃နှစ်လုံးလုံး အာဏာကိုမလွဲချင်လို. လုပ်ချင်သလိုလုပ်၊ အုပ်ချုပ်ချင်သလို အုပ်ချုပ်ခဲ့၊ NLD ကိုလည်း ရိုက်ချိုးခဲ့တာ ရစရာမရှိပါဖူး၊ အရင်က အနှစ် ၂၃ လုံးလုံး ဒေါ်စုကိုမုန်းတီးလာခဲ့ပြီးမှ ခုမှ ဒေါ်စုကို အစိုးရက သိပ်ချစ်ပြနေတာက တကယ့်ကို သံသယအကြီးအကျယ်ဖြစ် မိပါတယ်၊
လူထုထောက်ခံမူ ၊ ပြည်သူလူထုနဲ. နိုင်ငံတကာက မန်းဒိတ်ရတဲ့သူတစ်ယောက် အနေနဲ. လုပ်ဆောင်နေတာတွေက အားရကျေနပ်ဖွယ် လုံးလုံးမရှိပါဖူး၊
ဒေါ်စု ထောက်ခံတဲ့သူတွေက ပြောမယ်၊ အိမ်အကျယ်ချုပ် အကြိမ်ကြိမ် အချုပ်ခံရတယ်၊ အနစ်နာခံတယ်ပေါ့၊ ကျွန်တော်လည်း စိတ်မကောင်းမိပါဖူး၊ ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြောချင်တာက ဒေါ်စု အိမ်အကျယ်ချုပ်ခံနေရပေမဲ့ ထမင်းကောင်းကောင်း ဆီပြန်ဟင်းနဲ. စားနိုင်ပါတယ်၊ အဲယားကွန်းနဲ. မီးမပျက်ပဲ နေနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီ့အချိန်မှာ ဒေါ်စုကို အား ကိုးပြီး ကောင်းလာမှာပဲလို. မျှော်လင့်နေ တဲ့ပြည်သူလူထုကြီးက ထမင်းရည်တောင် နပ်မှန်အောင် မသောက်နိုင်လောက်အောင် အရမ်းကိုဆင်းရဲနေပြီဆိုတာကို သတိရစေချင်ပါတယ်၊
တစ်ချို.က စကားကပ်ပြောပါလိမ့်မယ်၊ မင်းခေါင်းဆောင်တက်လုပ်ပါလားလို.၊
ပြည်သူတွေက အားကိုးလို. ခေါင်းဆောင် တင်ထားတဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ. အစိုးရရဲ့ အချိန်ဆွဲတဲ့အထဲမှာ မတွေဝေ၊ မသာယာပဲ ရဲ့ရဲ့ဝံ့ဝံ့ ပြတ်ပြတ် သားသား ဆောင်ရွက်သင့်ပါပြီ ၊
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေဘလော့က ဆောင်းပါး တွေမှာ လမ်းပေါ်ဆန္ဒပြထွက်ဖို.လှုံ.ဆော်တဲ့ အကြောင်းတွေရေးခဲ့တာကို ကျွန်တော် တောက်လျောက် ဆန်.ကျင်ခဲ့သူပါ၊ ကိုယ့်ကရှေ.တန်းက မားမားမတ်မတ် မရပ်တည်နိုင်ပဲ ပြည်ပကနေ မြန်မာပြည်တွင်း က ပြည်သူတွေကို မမြှောက်ပေး သင့်ဖူးလို.ခံယူမိပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိင်ငံရေးက တစ်တိုင်းပြည်လုံး ဆန္ဒမပြပဲ၊ သွေးထွက်သံယိုမှု အကြီးအကျယ် မဖြစ်ပဲနဲ. မပြောင်းနိုင်ဖူးဆိုတာ နားလည်မိလိုက်ပါတယ်၊ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ကတော့ ပြည်သူလူထုကြီးပါပဲ၊ အစိုးရကတော့ သူတို.နည်းနဲ. ရသလောက်တော့ လိမ်နေ၊ အချိန်ဆွဲနေမှာပဲ၊ (အရင်ကလည်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လိမ်ခဲ့တာကို အားလုံးအသိပါ)၊ စစ်ယူနီးဖောင်းကို ချွတ်ပြီး ပုဆိုးနဲ. တိုက်ပုံဝတ်လိုက်တာနဲ. လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို မပြောင်းလဲနိင်ပါဖူး၊ အဲဒါကို အစိုးရက လျော့နေပြီဟေ့၊ ကောင်းလာ မှာပဲ၊ ဆွေးနွေးနေပြီလေလို. အပြုသဘောဆောင်တဲ့သူတွေက တစ်တုံးစားလည်း ချီးမှန်း မသိ၊ နှစ်တုံးစားလဲ ချီးမှန်းမသိတဲ့သူတွေသာဖြစ်ပါတယ်၊
AUNG -Spore said...
ထိုစာရေးသူသည် မိမိအမည်ကိုရော ဒေါ်စု ဘာလုပ်သင့်ကြောင်း တိတိကျကျ ဖော်ပြပါ။ မည်သည့်အရာမဆို အဖျက်သဘော ဝေဖန်ရသည်မှာလွယ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်မှာ ဒေါ်စုထက် ထက်မြက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် ပြည်သူချစ်သော မိန်းမ ရှိလျှင်ထောက်ပြပါ။ no one is perfect in this world.
အားကစားဖြင့် တိုင်းပြည်ကို စည်းရုံးနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြင်သစ် World Cup ဗိုလ်ဆွဲတုန်းက ပြသခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်း အညီညွတ်ဆုံးဖြစ်ချိန်ဟာ World Cup မှာဗိုလ်စွဲတုန်းက ဖြစ်ပါတယ်လို. နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေက ပြောခဲ့ပါတယ်။
World Cup ဖိုင်နယ်ပွဲတွေမှာ အထူးသဖြင့် ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေ (ဥပမာ ဂျာမဏီနဲ. အီတလီ) အတူထိုင်ပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံအသင်းကို အားပေးခဲ့ဋ္ဌကတာပါဘဲ။
အမေရိကန်သမတ Bush တောင် 9/11အတိုက်ခံရ အပြီးမှာ Baseball ပွဲမှာ ဘောလုံးပစ်ပြီး ဖွင့်ပေးခဲ့တာဘဲ။ အဋ္ဌကမ်းဖက်အတိုက်ခံပြီးကာစမှာ တနိုင်ငံလုံးက သမတရဲ့ Baseball ဖွင့်ပွဲကို အထူးစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ အားကစားဖြင့် စည်းရုံးရေးဟာ အင်မတန် အရေးပါပါတယ်။
ဒေါ်စု ဘောလုံးပွဲသွားအားပေးခြင်းဟာ အကျိုးမယုတ်နိင်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်သူတွေ ဘောလုံးပွဲကို ဘယ်လောက် ဋ္ဌကိုက်သလဲဆိုတာ အားလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်။
ဘောလုံးပွဲသွားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်စုကို နားလည်နိုင်ပေမဲ. သူမရဲ.ပြော စကားအချို.ဟာ ကျနော်တို.ကို (လူအချို.ကို) စိတ်ဓါတ်ကျသွားစေတယ် ဆိုတာအမှန်ပါဘဲ။
၁။ အရှိကို အရှိအတိုင်း အသိမှတ်ပြုပါတယ် (လက်ရှိ ဋ္ဌကံ့ဖွတ် အစိုးရပေါ် သဘောထား၊ ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကို အသိမှတ် မပြုဘို. စဉ်ဆက်မပြတ် တိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေအပေါ် ပြောဋ္ဌကားချက်များလား)
၂။ တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးချခံရတာကို ခံနိုင်ပါတယ် (တိုင်းပြည်အတွက်ထက် စစ်အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်ရေးကို အကာအကွယ်ပေးရေး ဖြစ်နေမှာကို ပူနေသူများအပေါ် တုံ.ပြန်ချက်များလား)
၃။ အာရပ်ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ဆန္ဒပြ တောင်းဆို လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ. ပြသနာတွေနဲ.ကိုက်ညီခြင်း မရှိဘူး (အရှေ.အလယ်ပိုင်းနှင့် မြောက်အာဖရိကရှိ အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးများနှင့် အနောက်ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံဋ္ဌကီးများရဲ့ ထောက်ခံအားပေးမှု၊ လူငယ်တို.ရဲ. သက်စွန်.တိုက်ပွဲဝင်မှုတွေနဲ. ပြည်.နက်နေတဲ့ ခေတ်ရေစီးဋ္ဌေကာင်း တော်လှန်ရေးများ။ ရေးစီးဋ္ဌေကာင်းနဲ.အညီ တိုက်ပွဲဝင်ဘို. အာသီသရှိနေတဲ့ ပြည်သူတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ ကိုဋ္ဌကားစေဘို.များလား)
ဒီပြောဋ္ဌကားချက်တွေကို နားထောင်ပြီး၊ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံမတိုင်မီက အခြေအနေမျိုးပြန်ရောက် သွားပြီလားလို. ခံစားရပါတယ်။
ခေါင်းဆေင်းလည်းမရှိ၊ အဖွဲ.အစည်းလည်းမရှိ မခံချင်တဲ့စိတ်နဲ. လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်ရတော့မဲ့ ဘ၀ကို ပြန်ရောက်သွားလေရော့သလား။
ဝတုတ်ရေ မင်း အဘိုးမျက်နှာတောင် မထောက် မရှက်ဘူးလား။ ဝတုတ်ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော် မြေးပါ။ အရင် ဘီဘီစီမှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ သူရိန်ကျော်ဇော ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါ။ မင်းအဖိုး မသေသေးပါဘူး။ မင်းဖာသာမင်း နေချင်သလိုနေလို့ရပေမယ့် သူ့မျက်နှာတော့ ထောက်သင့်ပါတယ်။ မောင်ရင် အင်္ဂလန်မှာ အေးအေးနေပါ။ တိုင်းပြည် အတွက် အခုလို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း စာတွေရေးတာက လွဲလို့ မောင်ရင် ဘာတွေ လုပ်ခဲ့လဲ။ ဟိုတကောင် ဘိုဘိုလန်းစင် "သူမသည် ဘောသို့သွားသည်တဲ့" မင်း ပို့စ်မှာ ရေးထားတယ်။ သူ့အဖိုး၊ အဖွား (လူထု ဒေါ်အမာ၊ လူထု ဦးလှ) တို့ မျက်နှာမှ မထောက်၊ ဟိုလူ့ဆဲ ဒီလူ့ဆဲနဲ့ မပြည့်အိုးတွေ။ မင်းတို့ ကိုယ့်ဖာသာ မေးကြ ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ။
ဒဏ္ဍာရီ တေး said...
(အပေါ်ကအဆက်) ပြည်ပက လုံခြုံတဲ့ အခန်းတစ်ခုထဲကနေ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်ပြီး လူထုတော်လှန်ရေး၊ လူထုတိုက်ပွဲ၊ ပြည်သူတွေရဲ့အဆုံးအဖြတ် နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ လှုိင်းလုံးစသည်ဖြင့် လေလုံးနိုင်ငံရေးလုပ်လိုက်၊ အပြင်ထွက် ဘီယာသောက်လိုက်၊ ဟမ်ဘာဂါလေး စားလိုက်၊ လျှောက်လည်လိုက်၊ ဒီလိုမျိုး လှုံဆော်မှုများကြောင့်လည်း နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။ ပြည်ပက လေနိုင်ငံရေးသမားတွေအယောက် တစ်သိန်း လောက်နဲ့ ပြည်တွင်းက အညတရ လူမသိသူမသိ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက် ဘယ်သူ ပိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ အလွယ်ဆုံး အနီးကပ်ဆုံး ဥပမာပေး ခိုင်းနှိုင်းရရင် ဘေးမှထိုင်ပြီး အားမရဖြစ် ဝေဖန်နေကြသူ တစ်သိန်းသည် ပြည်တွင်းက ကိုဖိုးဖြူလောက်တောင်အဖြစ်မရှိကြပါ။ နောက်ပြီး ပြည်တွင်းပြန်ပြီး လှုံဆော်လျှင် အဖမ်းခံရမည်ကိုလည်း ကြောက်နေကြပါသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင် ပြည်တွင်းပြန် ၊ စည်းရုံးလှုံဆော်ကြစေလိုပါတယ်။ ဒါတွေဟာ မလွယ်မှန်းသိလို့ လွယ်တဲ့ လေနိုင်ငံရေးပဲ လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်း လမ်းစဉ်ပါတဲ့ စံမီတဲ့ဆောင်းပါးများကို ရေးသားပြစမ်းပါလို့။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကို ဗိုလ်ချုပ်ပြောဖူးတဲ့ စကားလေး ရှိပါတယ်။ ခွေးဟောင်တိုင်း ထကြည့်နေရင် အိပ်ရေးပျက်တယ်ဆိုတာ။
ကျွန်တော်ဒီစာကို နာမည်အရင်းနဲ့ ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုဝတုတ်နာမည်ရင်းနဲ့ ရေးရင် ကျွန်တော်လည်း နာမည်ရင်းနဲ့ ရေးမှာပါ။ ကိုဝတုတ်က မြန်မာပြည်ကို ပြန်ချင်မှ ပြန်မှာဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်က ပြန်ရဦးမှာ။ ဒီလို ကြောက်လို့ မြန်မာပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာဆိုလည်း ဟုတ်ပါတယ်လို့ ၀န်ခံပါတယ်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်ဟာ ကိုဝတုတ်နဲ့ ပုလင်းတူဗူးဆို့ ကိုပေါရဲ့ ဘလောက်ပရိသတ်တဦးပါ။ သူ့ကို ကျောင်းတူဘာသာတူတဲ့ သံယောဇဉ်အရရော၊ သူ့ရဲ့ သတ်တိကြောင့်ရော၊ သူ့ဘလောက်ကို ဖတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုပေါအားပေးထောက်ခံတဲ့ စလုံးက ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီလည်း သောက်သောက်လဲရှုံး၊ ပြည်တွင်းကိုလည်း အားမရ၊ ပြန်လည်း မလုပ်နိုင်၊ စိတ်ညစ်ပြီး ကုပ်နေရာကနေ လေနိုင်ငံရေးထလုပ်ပြီး ချက်ချင်းစင်မြင့်ပေါ်ရောက်လာအောင် ဆောင်းပါးတွေရေး၊ နာမည်တော့ ကြီးတာပေါ့ဗျာ။ ငါ ကိုပေါကွ ၊ ဒါငါ့လမ်းစဉ် ၊ ဒီလိုတိုက်ယူရင် ရမယ်ဆိုပြီး လမ်းစဉ်ချပြစမ်းပါ။ ကိုယ်တိုင်သွားလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘယ်လိုလုပ် ဆိုတာပဲ ပြောလိုက်စမ်းပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ ဆောင်းပါးတွေဖတ်ပြီး ဟိုကြော်ငြာတစ်ခုကို သတိရမိတော့တယ်။ .. ဟိုလိုလုပ်ပါလား...ဒီလိုလုပ်ပါလား .....ငါလည်း မလုပ်တတ်ဘူး............
ဒီစာစုဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဝေဖန်ရေးဆောင်းပါးမဟုတ်ပါ။ အစိုးရသတင်းစာတွေမှာပါတတ်တဲ့ ငါးမင်းဆွေလိုလူမျိုးရေးတတ်တဲ့ မိုက်ရိုင်းစော်ကားတဲ့ စာတွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဒီလိုစာတွေကို ရှာရှာဖွေဖွေ ဖော်ပြတဲ့ လွဏ်းဆွေ ကလဲ ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်လိုက်တာပါပဲ။
အကောင်းဆုံးလို့ သူထင်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ 
စားစားအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ရေးမယ်ဆိုရင် ဒီဆောင်းပါး
နှစ်ရှည်လများ ဒုက္ခခံပြီးရုန်းကန်နေတဲ့ 
ကိုယ့်နာမည်တောင်ကိုယ် မဖော်ပြရဲတဲ့သူက ဒီလိုကျတော့ ရဲရဲတင်းတင်း ဟောင်ရဲတာ မအံ့သြပါဘူးဗျာ..
လက်စသတ်တော့ ပုဂ္ဂိုလ်က ကွန်မြုနစ်လက်ကျန်ကိုး။ ပဒေသရာဇ် တိုင်းပြည်အရိပ်ခိုပြီး ကမ္ဘာ့ပစ္စည်းမဲ့ အာဏာရှင်စံနစ်ထူ ထောင်ဘို့ရာ အာရှ၊ အာဖရိက နဲ့ လက်တင်အမေရိက က မလိမ်မိုးမလိမ်မာ လေးတွေကို တရေးနိုးတိုင်း ထထမြှာက်ပေးနေနေတဲ့ ကွန်မြူနစ် ကျောရိုး အမာခံကိုး။ တလောတုံးက လန်ဒန်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လမ်းပေါ်အုံကြွ လုယက်မှုတွေ တောင် သူတို့ပယောဂ ကင်းရဲ့လား မေးစရာပါ။
သူတို့လက်နဲ့ တိုက်မယူရလို့ ဗမာပြည်လွပ်လပ်ရေး တောင် အစစ် မဟုတ်ဘူး ပြောခဲ့၊ အစစ်ဖြစ်အောင် မြေပေါ်မြေအောက် တိုက်ပွဲတွေနဲ့ ပြည်သူတွေကို ထိုးကြွေးခဲ့နဲ့ ခုချိန်ထိ “အကြံကောင်းရင် တချက်” ပြည်ဖျက်ဘို့လုပ်နေကြ တုံးဆိုတာ သတိမလွတ်သင့်ကြပါ။ ၈ လေးလုံး အပါအဝင် စစ်အစိုးရလက်ထက်
ကျောင်းသား ပြည်သူတွေရဲ့စစ်မှန်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတိုင်းမှာ သူတို့တတွေ ပူးကပ်ဝင်ရောက် ပြီး “အပြီးသပ်ချေမှုန်းရေးလမ်းစဉ်” နဲ့ ရိုးသား တက်ကြွသလောက် အတွေ့အကြုံနုနယ်တဲ့ လူငယ်တွေကိုအသုံးချ ခဲ့မှုတွေ၊ ချောင်ပိတ်ခံရတဲ့ အစိုးရကကျားနာခဲပြန်ခဲ လို့ ပြည်သူတွေ အထိနာပြီး အာဏာရှင် သက်ဆိုးရှည်ခဲ့ ရတာတွေကို မမေ့သင့်ကြပါ။ ဟိုတုံးက ဝေဖန်ပိုင်းခြားသြဇာကြီးမားတဲ့၊
ပြည်သူတွေကိုးစားလောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မရှိခဲ့လို့ သူတို့ရော အာဏာရှင်ရော အလှည့်ကျ နှိပ်ကွပ်သမျှ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလဲ သူတို့ အသုံးချလို့ရမယ် ထင်ပြီး ထောက်ခံ (ယာယီမဟာမိတ်ဖွဲ့) ခဲ့ရာက ခု ဒေါ်စုက (အာဏာရရေးထက်) ပြည်သူတွေ ကောင်းစားရေး ကို ရှေရှုကြောင်း ပြောဆိုပြသလာတဲ့ အခါ (ဒေါ်စု အကြောင်းပြု ပစ္စည်းမဲ့အာဏာရှင် တည်ဆောက်ရေး နောက်ဆုံး အိပ်မက် ပျက်ရချည်ရဲ့ ရယ်လို့) ဒေါ်စု ဆန့်ကျင်ရေး ဒေါ်စု ခေါင်းဆောင်မှုပျက်ပြားရေး ကို မဖြစ်မနေလုပ် ဆောင်လာကြပါပြီ။ အပေါ်ကတဦး ဆွေးနွေးသွားတဲ့အတိုင်း ဒါဟာ သမိုင်းတပတ်လည်ခြင်း ဖြစ်သလို ကွန်မြူနစ်တွေ ရဲ့မကြေပွဲ (ဒါမှမဟုတ် နောက်ဆုံးမီးတောက်) တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်စုဟာ သူတို့ထင်လို “အချဉ်” မဟုတ်တာသေချာပေမဲ့ အတ္တအကြီးဆုံး အုပ်စုနှစ်ခု (စစ်အုပ်စုနဲ့ကွန်မြူနစ်) ရဲ့ အညီအမျှသိက္ခာချမှုတွေ ကြောင့်အာရုံပျက်ရ ရင်တောင် ပြည်သူတွေနစ်နာ လှပါပြီ။ ဖခင်ရဲ့ စိတ်ဓါတ် နဲ့ အရည်အချင်းတိုသာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ဖခင်ရဲ့ အဝန်းအဝိုင်း မျိုးမရှိရှာတဲ့၊ ဖထင်ထက်တောင်ပို ကြီးမားတဲ့ “ဓါးရိုးကမ်းတွေ” နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အနေအထား ကို သိကြဘို့ နဲ့ လက်တွေ့ဝန်းရံကြ ဘို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးရဲ့ (နိုင်ငံကို စစ်မှန်သော ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိစွာနဲ့ တိုးတက်စေလိုတဲ့) ပြည်သူအားလုံးရဲ့ အရေးကြီးဆုံး
တာဝန် ဖြစ်နေပါပြီ။ ပြည်သူတွေမှာလဲ တာဝန်ရှိပါတယ် လို့ ဒေါ်စု ပြောလေ့ရှိတာဒီသဘော လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကိုယ့်လူရေ သိပ်တတ်ပြီး သိပ်လုပ်ချင်ရင် ပြည်တွင်းကိုပြန်ခဲ့ပါ။
အဝေးကနေ ဟိုလိုလုပ်ပါလား။ ဒီလိုလုပ်ပါလားတွေပြောမနေပါနဲ့။
ခင်ဗျားဘယ်သူဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ ပိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
ခင်ဗျား ဒီလောက်အတွေးတိမ်ပြီး အမြင်ကျဉ်းလိမ့်မယ်လို့အရင်က မထင်ခဲ့ဘူး။ ခင်ဗျား ရဲ့ သမိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးချက်လေးတွေ ဖတ်ဖူးလို့ ပါ။ ခုတော့ အားလုံး ရှင်းသွားပါပြီဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ပုလင်းတူဘူးဆို့ အဖွဲ့(ဘိုဘိုလန်းစင် အပါအ၀င်) ဟာ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း အရင်ကလည်း ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ အခုလည်း ဘာမှ လုပ်မနေဘူး။ စာလေးနဲနဲတတ်ရုံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို အခြောက်တိုက် ဘ၀င်မြင့်နေတဲ့ မပြည့်အိုး တွေ။ ပုဆိုးချုံထဲက လက်သီးလက်မောင်းတန်း နေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ဟာ ခင်ဗျားတို့အမေအရွယ် မုဆိုးမတစ်ရောက်လောက်တောင် သိတ္တိ နဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားမရှိတဲ့ သူတွေပဲ။ ဒီလောက်ပဲပြောတာ ခင်ဗျားတို့အဖိုးအဖွားတွေကို ချစ်ခင်လေးစားလို့ ပါ။ ကျွန်တော်အတတ်ပြောလိုက်မယ်ဗျာ။
ခင်ဗျားတို့ဟာ ဒေါ်စုကို (မသိစိတ်ထဲက) လုံးဝမနာလိုဘူး ။ အသေးစိတ် တော့မရေးတော့ပါဘူးဗျာ။ အဲဒီ မနာလို ၀န်တို တဲ့ မစ္ဆရိယ စိတ်နဲ့ ရေးတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျား (တို့ ) စာက သက်သေပြနေတယ်။ ဒလလောက်တော့ ငှက်တိုင်းလှပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့သိသလောက် တွေးတတ်သလောက်ကတော့ လူတော်တော်များများ တွေးတတ်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ သိထားဖို့ က ပြည်သူဟာ ဒေါ်စုကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထောက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ လုပ်ရပ်ကို ထောက်ခံနေတာ ဆိုတာ ခင်ဗျားမှတ်ထား။
ဒီပို့ အတွက် တော်တော်ကို စိတ်ပျက်မိတယ်ဗျာ။
သြော်.. နေတော့ဖြင့် ဘေးထွက်ပြီး လွတ်လွတ်ကင်းကင်းထိုင်နေ၊ လေပေါက်က ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်နေတဲ့လေပေါက်၊ လုပ်နေတဲ့လုပ်ပေါက်က ရှေ့ကသွားနေတဲ့လူကို လဲအောင် နောက်ကနေ ခြေလှမ်းထိုးနေတာ.. အင်းး ဒွတ်ခ... ဒွတ်ခ... ဒွတ်ခ
ဝတုတ် တို့တုတ်ကြီး တို့ ရေ.. သတ္တိရှိရင် နာမည်ရင်း email အမှန်တွေနဲ့ ဆောင်းပါရေးကွ. သိပ်သိ သိပ်တတ်နေရင် ပြည်တော်ပြန်ပြီး ရဲရဲဝံဝံလုပ်ကွ. တိုင်းပြည်အပြင်မှာနေပြီး နာမည်ဝှက်တွေနဲ့ ရေးနေတာ သိပ်ကြောက်တတ်မှန်း ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးပြနေမှန်း သိပ်သိတာတယ်။ မင်းတို့ တွေလည်း သူတောင်းစားအဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ အတူတူဘဲ. မင်းတို့ ကိုအမြဲတမ်း ပေးကမ်းနေတာတွေ မရတော့လို့နောက်တစ်နည်းထွင်းနေတာလား..? တိုင်းပြည်နဲ့ ဒေါ်စုကိုအသုံးချပြီး စားပေါက်လမ်းထွင်နေတာလား..? မင်းတို့ တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုပြင်သင့်ပါပြီး။ တစ်နေ့ တစ်နေ့ တောင်းစားလို့ ရတဲ့ဒေါ်လာတွေနဲ့မူးယစ်ရမ်းကားမနေပါနဲ့ ကွာ။ ဒါက်တာလွဏ်းဆွေ လည်း ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲဘဲ။
Lately Dr the articles posted at this web site are funny and substandard. Long time now I haven't been reading the articles posted by Dr Lun Swe on his website. I only read the news. I an not sure what is wrong with Dr Lun Swe. Posting those poisonous and
sub standard articles should be stopped.